How will I know if my child has COVID-19: Ngizokwazi kanjani ukuthi ingane yami ine-COVID-19? – Messages for Mothers
How will I know if my child has COVID-19: Ngizokwazi kanjani ukuthi ingane yami ine-COVID-19?
Post date 28th Oct 2020
Kungenzeka ingane yakho ine-COVID-19 Uma inezinye zalezi zimpawu: ukukhwehlela, umphimbo obuhlungu, ukuphefumula kanzima, ukulahlekelwa yiphunga noma ukunambitha inayo noma ingenayo imfiva, ubuthakathaka, imisipha ebuhlungu noma uhudo. Ingane ingahle ibe nokutheleleka kwe-COVID-19 futhi iphile, ngaphandle kwezimpawu.
Umuntu ophilile obesondelene kakhulu nomuntu owaziwa ukuthi une-COVID-19 angaba nokutheleleka.
Njengezinye izinhlobo zemfuluwenza, ayikho imishanguzo ethize ye-COVID-19
Nikeza i-paracetamol ngenxa yemfiva noma izinhlungu
Ingane yakho nabo bonke abanye ekhaya lakho kumele bahlale ekhaya bodwa izinsuku ezingu-14
Ezinganeni eziningi, ukuhlolwa kwe-COVID-19 kuzokwenziwa kuphela uma kudingeka zihlale esibhedlela
Ukuphumula nokudla ngendlela enempilo kungasiza
Uma ukhathazekile ngengane yakho (ihlushwa ukuphefumula, iyagexa futhi ibuthakathaka kakhulu):
Uma ucabanga ukuthi yisimo esiphuthumayo, shayela i-ambulense;
Noma, shayela iseluleko emtholampilo wakho ojwayelekile noma kudokotela.
← Are there medicines to prevent my child getting COVID-19: Ngike ngizwa ukuthi kuneminye imithi namakhambi engingawanika ingane yami ukuyivimbela ukuthola i-COVID-19 – ingabe kuyiqiniso? → How can I prevent my child passing on COVID-19 at home: Yini engenziwa ukuvimbela ingane yami ukudlulisela i-COVID-19 ekhaya?